Daraasad ayaa sheegtay in la helo New link hidde u dhaxaysa hal-abuurka iyo cudurada dhimirka - Rule News
Daraasad ayaa sheegtay in la helo New link hidde u dhaxaysa hal-abuurka iyo cudurada dhimirka
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “Daraasad ayaa sheegtay in la helo New link hidde u dhaxaysa hal-abuurka iyo cudurada dhimirka” waxaa qoray Sample editor Science Ian, for The Guardian on Monday 8th June 2015 17.04 UTC
The Gariigta hore ahaayeen marka hore in la sameeyo barta. Shakespeare aad sara kiciyey rajada. Laakiinse Rabbigu Byron ahaa, laga yaabee, ugu toos ah iyaga oo dhan: "Waxaan la shuqul jira oo dhan waalan,"Ayuu u sheegay Countess of Blessington, iyagoo indhaha ka walwalsan uu la shaqayn jiray gabayayaashiinnu.
Fikrada ah ee farshaxanka jirdilay waa meme madax adag. Hal-abuurka, waxa uu sheegayaa, waxaa sii jinniyadu in fannaaniinta leg danto in saacadaha ay lood. Fikradda waa arradan in saynisyahano badan. Laakiin baadhitaan cusub ayaa sheegay link waxaa laga yaabaa in si wanaagsan loo-la aasaasay ka dib dhan, oo ku qoran gelin taagoo qaloocin of our DNA.
Related: Waa maxay sababta aan necbahay quraafaad ah ee artist dhibaatada
In baadhitaan ballaadhan daabacay on Monday, saynisyahano Iceland sheegaan in qodobada hidaha khatarta kicin kara ee cudurka laba-cirifoodka iyo schizophrenia waxaa la helay in ka badan inta badan ee dadka xirfadaha hal abuur leh. Ranjiilayaasha, fannaaniin, qorayaasha iyo ahaydba ahaayeen, celcelis, 25% u badan tahay in ay qaadaan Lahjadaha hiddo badan xirfadaha saynisyahano ku xukumay in ka yar hal abuur ah, ka mid ah ay ahaayeen beeralay, beertiisa Buugga iyo wax iibiya.
Kari Stefansson, aasaasaha iyo CEO of aqrisan, Shirkadda genetics ku salaysan in Reykjavik, ayaa sheegay in natiijada, ku tilmaamay weriyey Neuroscience Nature, dhibic si ay bayoolaji ah oo caadi ah in qaar ka mid ah xanuunada maskaxda iyo hal-abuur. "Si aad u noqoto hal abuur leh, aad leedahay si aad u malaynayso in si ka duwan,"Ayuu u sheegay The Guardian-ka. "Oo markii aannu ka duwan yihiin, waxaan leenahay u janjeera in ay la tilmaamay qalaad, waalan oo xitaa waalan. "
saynisyahano ayaa dhowaanaysay macluumaad hidde iyo caafimaadka ka 86,000 Icelanders si aad u hesho kala duwanaansho hidde in labanlaab halis celceliska schizophrenia, iyo sara kiciyey halista cudurka laba-cirifoodka in ka badan saddex meelood meel. Marka waxay soo fiiriyeen at sida caadiga ah Lahjadaha kuwanu waxay ahaayeen in xubno ka mid ah bulshada farshaxanka qaranka, waxay heleen a 17% korodhka la aan xubnaha ka ahayn marka la barbar dhigo.
Cilmibaadhayaasha ayaa ku tageen si loo hubiyo natiijooyinkii ay database caafimaad badan qabtay ee Netherlands iyo Sweden. ka mid ah kuwan 35,000 dadka, kuwa loo arko inay hal abuur leh (by xirfad ama jawaabaha su'aalaha a) waxay ahaayeen ku dhowaad 25% u badan tahay inay qaadaan Lahjadaha jirradaada maskaxeed.
Stefansson ayaa aaminsan in tiro hidda kordhiyaan halista schizophrenia iyo cudurka laba-cirifoodka. Kuwani soo baxayna waxaa laga yaabaa in siyaabaha ay dad badan u maleynayaa, laakiin dadka intooda badan waxba samayn wax aad u dhib. Laakiin 1% dadweynaha, qodobada hidaha, waayo-aragnimada nolosha iyo saameynta kale lihina karaa dhibaatooyin, iyo ogaanshaha cudurka dhimirka.
"Inta badan, dadka marka la abuurayo wax cusub, waxay soo afjaro dherersan inta u dhaxaysa saaxiga iyo waali,"Ayuu yiri Stefansson. "Waxaan qabaa in natiijada kuwaas oo taageero fikradda jir ah oo hanad waalan. -Abuurka waa tayo leh in uu ina siiyey Mozart, Bach, Van Gogh. Waa tayo leh in uu yahay mid aad muhiim u ah bulshada. Laakiin ay timaado halis ah in qofka, iyo 1% dadweynaha bixiya qiimaha waxaa loogu talagalay. "
Stefansson qirtay in uu waxbarasho ka helay oo keliya link daciif ah oo u dhexeeya kala duwanaansho hidde cudurrada dhimirka iyo hal-abuur. Oo waa in saynisyahano kale soo qaado on. The xaaladaha firka kor halista dhibaatooyin maskaxda sharaxay ku saabsan oo kaliya 0.25% ee kala duwanaansho ah ee awoodda farshaxanka dadyowga ', waxbarasho ka helay. David Cutler, geneticist a at University Emory ee Atlanta, dhigeysa tirada in aragtida: "Haddii masaafada u dhexeysa i, qofka ugu yaraan farshaxanka aad u socotaan si ay ula kulmaan, iyo artist ah oo dhab ah waxa uu ka mid mile, Lahjadaha kuwaas oo u muuqdaan in ay si wadajir ah u sharax 13 cagaha fogaanshaha,"Ayuu yiri.
Inta badan, kartina hal abuur artist ee, ka dibna, waa hoos si arrimo hidde kala duwan, ama in ay saamayn kale dhammaantood, sida waayo aragnimada nolosha, in iyaga dhigay meeshii on sodcaalkoodii hal abuur leh.
Waayo, Stefansson, xataa xirmi yar oo u dhexeeya bayoolaji ee cudurka dhimirka iyo hal-abuur waa soo jiidasho leh. "Waxa ay ka dhigan tahay in wax badan oo wanaagsan aan helno nolosha, iyada oo loo marayo hal-abuurka, yimaadaan qiimo. Waxaa ii sheegayaa in marka ay timaado in our biology, waxaan u leeyihiin in ay fahmaan in wax kasta waa in hab qaar ka mid ah oo wanaagsan iyo in hab qaar ka mid xun,"Ayuu yiri.
Laakiin Albert Rothenberg, professor of nafsiga ka dhiga Jaamacadda Harvard ma aha qanacsanahay. Wuxu qabaa, in ay jirto wax caddeyn u wanaagsan xiriir ka dhexeeyo cudurka maskaxda iyo hal-abuur. "Waa fikradda ah taataabtay ee qarnigii 19aad, in artist waa struggler ah, aberrant bulshada, iyo hardamayo jinniyada hoose,"Ayuu yiri. "Laakiin Van Gogh. kaliya uu dhacay in ay maskaxda ka jirran iyo sidoo kale hal abuur leh. Aniga ahaan, dambe waa u xiiso badan: dad hal abuur leh guud ahaan aan maskaxda ka jiran, laakiin ay isticmaalaan hababka fikirka in ay yihiin dabcan hal abuur leh oo kala duwan. "
Haddii xanuun Van Gogh ahaa duco, artist hubaal ku guuldareysatay inay u arkaan jidkaas. In mid ka mid ah waraaqaha uu soo dhaafay, uu ka hadlay sida uu naxdin at cudurka la diriray, waayo, sidaas badan oo naftiisa: "Oh, haddii aan la soo shaqeeyay ayaa laga yaabaa iyada oo aan cudurkan la xarrimay, – wixii aan ku samaynay. "
In 2014, Rothernberg daabacay buug, "Flight of Wonder: baaritaan of abuurka sayniska", taas oo uu waraystay 45 sayniska Nobel Laureates ku saabsan xeeladaha ay hal abuur leh. Wuxuu ma helin wax caddeyn ah xanuunada maskaxda iyo mid kasta oo iyaga ka mid ah. Waxa uu ka shakiyo in waxbarashada oo heli xiriirka ka dhexeeya abuurka iyo cudurada dhimirka waxaa laga yaabaa in kor u qaadaaya wax halkii kala duwan.
"Dhibaatada waxa ay tahay in shuruudaha iyagoo hal abuur marna waa wax aad u hal abuur leh. Lahaanshaha bulshada farshaxan, ama ka shaqeeya farshaxanka ama suugaanta, ma caddayn qofka waa hal abuur leh. Laakiin xaqiiqada ah waa in dad badan oo qaba cudurka maskaxda ha isku dayaan in ay ka shaqeeyaan shaqooyin in ay leeyihiin inay sameeyaan leh fanka iyo suugaanta, maxaa yeelay, iyagu ma u wanaagsan at yihiin, laakiin maxaa yeelay, waxay soo jiidatay in ay. Oo in ahi.Waxa karo xogta,"Ayuu yiri. "Ku dhowaad dhammaan isbitaalada maskaxda isticmaali therapy tahay, oo sidaas daraaddeed markii bukaanka baxay iman, badan ayaa soo jiitay in jagooyinka farshaxanka iyo raad farshaxanka. "
1 In 4 Americans fikir Sun ayaa daba noqonayaa Dhegaha ...
sayid midho raaxo Japan ayaa koraan lacag on t ...
7 Waxyaabaha waad garan weyday jiray
16145	0 Qodobka, genetics, Ian Sample, Caafimaadka Maskaxda, News, Schizophrenia, Science, Van Gogh
← Ugu sareysa afar killers casriga ah ee galbeedka Qaliinka ididiilo hore aadanaha xubin madaxa ka dhigaysa garoonka dhakhaatiirta Maraykanka →